Shiinaha Gawaarida Gaaban ee Qalalan Qr Code-aan-Porous Media 45si 2588 2706K 2589 2580 2590 Cartridge Solvent Ink for Hand Jet Prining Printer Printer and suppliers | AoBoZi
Waa maxay koodhku?
Koodh sameynta waxay ku lug leedahay adeegsiga qoraalka, tirooyinka, astaamaha ama qaabab kale oo ku saabsan badeecad ama xirmo iyadoo la adeegsanayo khad. Ereyo kala duwan ayaa la adeegsadaa, sida codeynta, daabacaadda ama calaamadeynta, laakiin dhammaantood waa isku mid. Koodh sameynta waxay leedahay codsiyo dhowr ah iyo ujeedooyin waxaana jira siyaabo kala duwan oo koodhku u dhici karo.
Maxay tahay sababta loo adeegsado sireed?
Iyadoo la adeegsanayo koodh, waxaa suurtagal ah in macluumaadka si toos ah loo siiyo isticmaaleha. Waxaad ku dari kartaa isticmaalka-taariikhda, xogta xiriirka sanduuqa shixnadda, degel internet ama tilmaamaha isticmaaleha. Koodh sameynta waxaad ka sameyn kartaa shey la aqoonsan karo. Alaabada dabacsan, sanduuqyada ama balastarrada ayaa badanaa laga dhigaa kuwo la aqoonsan karo iyadoo la adeegsanayo barcode, lambarrada QR ama lambarrada nooca. Ujeedada soo dejinta ee koodhku waa in la sameeyo wax soo saar la raad raaci karo. Tani waa macluumaad muhiim u noqon kara soo saarayaasha. Iyaga keligood macluumaad ma bixiyaan. Waad ka fikiri kartaa lambarrada dufcadda, xogta soo-saarka iyo macluumaadka kale ee raadraaca iyo raadraaca.
12.7mm HP 2580/2590 kaydadka khad-dhaqaaqa qalajiyaha dhaqsaha ah iyo 25.4mm biiyaha weyn font weyn oo dhakhso qallalan u dhigma ayaa la jaan qaadaya inta badan mashiinada buufinta koodhka gacanta ee suuqa, mashiinka buufinta koodhka mashiinka mashiinka lagu buuxiyo kumbuyuutarka iyo madaxa xumbada kulul , aan xirnayn, aan sii dhammaanayn, biyuhu diirran yihiin oo heerkulkiisu adag yahay, oo leh warbixin tijaabo ah.
Waqtiga qalajinta degdegga ah ee 2-3 ilbiriqsi
Waqti goynta badan oo ka badan hal saac
Biyo-diid, Is xoqid-diid
Cufnaanta wanaagsan iyo mugdiga weyn xitaa hooseeya dpi
Sawir tayo sare leh oo leh geeso fiiqan
La jaan qaada
2580 / 2588M / 2588 + M / 2588K / 2586 / 45si / FOL13B, iwm
Caaga, Birta la Xakameeyay, Qurxinta, Dhalada Sharaabka, Gudiga xaabada
Baakadaha Cuntada, Ukunta Cusub, Marmar kudayasho
Haddii kaydadka khadka aan la isticmaalin, waa in lagu daboolaa dabool. Ka dib markii kateetarka khadku kala jeexan yahay oo la xiro, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo 3-4 bilood gudahood.
Hore: TIJ 2.5 Teknolojiyada Nooca Asalka ah ee Farsamada ee HP 45A 51645
Xiga: Dhalo biyo ku saleysan dib u cusbooneysiin HP 45A kaydadka khadadka loogu talagalay Daabacaadda Daabacaadda Xayeysiinta Xaraarada ee Kartoonada Waraaqaha
Daabacayaasha / Oline Madbacadaha Warshadaha ee Koodh siinta a ...
18ml Glitter Powder Color Calligraphy Qorista P ...
Inkabka Midabka ee Epson / Mimaki / Roland / Mutoh / Canon ...
Khariidadda Deegaanka Fudud ee Eco Solvent ee Roland ...
Qorista Calaamadaha Joogtada ah ee qalinka Birta, Pla ...